Barcelona Oo Difaacday Lionel Messi Xilli Rosyton Drenthe Uu Ku Eedeyay Inuu Cunsuri Yahay. - jornalizem
Barcelona Oo Difaacday Lionel Messi Xilli Rosyton Drenthe Uu Ku Eedeyay Inuu Cunsuri Yahay.
Barcelona ayaa difaacday Lionel Messi oo ku aadan eedeymaha ka dhanka ah ee cunsurinimada ah ee uu soo jeediyay laacibka ay milkayadiisa iska leedahay Real Madrid Royston Drenthe.
Drenthe, oo haatan amaah uga soo maqan Real Madrid islamarkaana u ciyaaraya Everton ayaa sheegtay in Messi uu si joogta ah ugu yeerayay “negro” intii uu Spain joogay.
Barcelona ayaa iska fogeysay eedeymaha loo soo jeediyay Messi, iyagoo ku amaanay dabeecadiisa.
“Ciyaaryahanka waxa uu mar walba soo bandhigayay ixtiraamka ugu sareeya iyo inuu yahay nin isboorti marka uu la xafiiltamayo ciyaaryahano kale, waa wax ay ku yaqaanaan ciyaartoyda kale oo dhan” ayuu yiri afhayeen u hadlay Barcelona sida ay qortay website-ka BBCsport.
“Waxaan hubnaa in eedeyn walba oo ka dhan ah Messi inay tahay wax xaqiiqda ka fog” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Drenthe oo 25 jir ah, kuna jira sannadkiisii ugu danbeeyay ee qandaraaska Real Madrid ayaa amaah ugu ciyaaraya Everton iyadoo dhawaan laga saaray kooxda David Moyes arimo la xiriira dishibiliinka darteed.
Waxa uu Real Madrid kaga soo biiray Feyenoord 2007dii, waxaana uu xilli ciyaareedkii hore amaah ugu ciyaaray kooxda Isbaanishka ee Hercules.
Wareysi uu siiyay majalada Helden, Drenthe waxa uu sheegay ina isku dhaceen Messi intii uu joogay Hercules.
Sidoo kale waxa uu ku eedeeyay ciyaaryahandii hore ay Real iskala ciyaari jiraan Gabriel Heinze iyo Gonzalo Higuain inay isticmaali jireen ereygaas marka garoonka tababarka la joogo lakiin markii danbe ay iska dhaafeen.
Wareysigan oo uu bixiyay 18kii April balse majalada reer Holland ay daabacday isbuucaan ayuu Darenthe ku sheegay in laga yaabo in dadka ka yimaada Latin America in ereyga “negro” uu ka yahay wax caadi ah balse uu yahay erey ay dhibsadaan dadka isaga oo kale ah.